I-SBA Ibhiyozela Umhla Wolutsha Ngencwadi Yokuzoba Ngemibala – SBAfrikaans
I-Sie Stingtig vir Bemagtiging deur Afrikaans yintlangano engenzi nzuzo ejolise ekufendeni okusisiseko okuyinkqubela yabantetho isisiBhulu, ngenjongo eyintloko ekuqinisekeni kokusebenzisa ingakumbi kubantu abaselula kuzo zonke iinkalo zobomi.
I-SBA inendlela yokwakha ejolise kwabanesiphene ngazo zonke inkqubo zokuxhasa iindlela zophuhliso. Kulo nyaka kugqitywe ekupapasheni incwadi kwabo bafundi banocelomngeni umbhali onguMdenishi uKlavs Skavsholm ubhale ibali elimnandi Labantwana ngokuhlangene neSBA ngo-2017 elileleSBA yoMzantsi Afrika ize ithethe nabafundi abaselula ngomxholo wasekuhlaleni- IThe Kokerboom\_Ukhalakhulu. Eli bali liye landiswa ngokuba yincwadi yokuzoba ngemibala yaye oku kulungiselelwa izikolo ezikhethekileyo kwiNtshona Koloni ngethemba lokuba oku kuqalise kufake isandla ekuphuhlisene uthando lokufunda, nobugcisa (bokuzoba) nokuveza izinto kubafundi.
Abafundi abafumene incwadi yemibala yokuzoba neekrayoni njengesipho sokugoduka naso , njengesipho somhla wolutsha bekunye nePaarl School eBrackenfell, neJan Kriel eKosana neAlta Du Toit Center neBet-El School eKosana iEros eFlakeni neAgape eMitchell’s Plain kwangaxeshanye le ncwadi yokuzoba ngemibala neekrayoni zinikelwa ngesisa kwizikolo saseTygerberg, eGroote Schuur nesaseRed Cross Children’s Hospital.